Echiche:46 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-09-27 Mmalite: Saịtị
5. pakwụ kwụrụ-ebu ụzọ na ịcha. Ma ọ bụ eriri igwe ma ọ bụ ngọngọ, a ga-etinye ya na saịtị maka ihe karịrị awa 24 iji weghachi ebe nchekwa nke ihe ahụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị na saịtị ahụ na-ewu. Jiri mkpịsị osisi pụrụ iche ka ị belata ma hichaa ọkụ nke eriri igwe. Mgbe ị na-etinye ihe nkedo, ekwesịghị inwe nkwonkwo n'etiti ihe abụọ ahụ. Mgbe ị na-etinye ihe a na-emechi ekpuchi, a ga-agwasị ihe mkpuchi nke ihe abụọ ahụ. Ohaneze, achọrọ ka ọ gafee 3 cm. Lezienụ anya idebe otu ịkpụ.
6. pazọ kwụrụ-aga. Họrọ kwekọrọ ekwekọ mama na squeegee kwesịrị ekwesị maka ịkwanyere flooring. Mgbe ị na-etinye ihe a na-emechi ekpuchi, gbanye otu njedebe nke ihe a na-ekpuchi ekpuchi, buru ụzọ hichaa ala na azụ nke ihe a na-ekpuchi ekpuchi, wee kpochaa mama na ala. Mgbe ị na-ebuo blọk, biko tụgharịa blọk ahụ site n’etiti ruo n’akụkụ abụọ, ma hichaa ala ahụ na azụ ala ahụ tupu ịmachaa mama. Dị iche iche nrapado nwere dị iche iche chọrọ n'oge na-ewu. Maka nkọwa zuru ezu, biko rụtụ aka na akwụkwọ ntuziaka ngwaahịa kwekọrọ na ya maka owuwu.
7. pakwụ kpuchie-iyuzucha, Rolling Mgbe n'ala na pasted, mbụ na-eji a okwuchi ngọngọ inupụ n'ala elu ka larịị na afanyekwa ikuku, na mgbe na-eji a 50 ma ọ bụ 75 n'arọ ígwè ala ka evenly tụgharịa n'ala na ewepụtụ ihe lgba na oge Ọnọdụ nke akụkụ ndị mebiri emebi. A ga-ehichapụ ihe nkochi ahụ dị n’elu ala n’oge. Mgbe awa 24 gachara, megharia uzo ma wepuo ozo.
8. A ga-emerịrị ihe ndina ụlọ ga-eme mgbe a gbanyechara gluu. Jiri ihe eji egwu egwu puru iche iji tinye oghere. Iji mee ka ịgbado ọkụ ahụ, akwa ahụ ekwesịghị ịbanye na ala. A na-atụ aro ka omimi dị omimi bụ ọkpụrụkpụ nke ala. 2/3. N'akụkụ njedebe ebe onye na-emepe emepe enweghị ike imeghe, biko jiri oghere akwụkwọ iji mepee onuete nwere otu omimi na obosara. Tupu ịgbado ọkụ ọkụ, a ga-ewepụpụ ihe fọdụrụ na uzuzu na uzo.
9. Ft paving-ịgbado ọkụ onu Ntuziaka ịgbado ọkụ egbe ma ọ bụ akpaka ịgbado ọkụ akụrụngwa nwere ike iji maka ịgbado ọkụ onuete. Ekwesịrị ịtọ egbe nke egbe ịgbado ọkụ n'ihe dịka ogo 350. Na ọsọ ịgbado ọkụ kwesịrị ekwesị (iji hụ na mkpado ịgbado ọkụ na-agbaze), pịgharịa mkpanaka ahụ n'ime oghere mepere emepe na ọsọ edo. Mgbe electrode bụ ọkara oyi, jiri electrode trowel ma ọ bụ a ọnwa egbutusị ebipụ akụkụ nke electrode nke dị elu karịa n'ala larịị. Mgbe electrode zuru oyi, jiri ikike nke iji electrode ma ọ bụ onye na-egbutu ọnwa iji kewaa ihe fọdụrụ na electrode.
11. cleaninglọ nhicha na ndozi ala PVC usoro dị iche iche ka emepụtara ma hazie maka ime ụlọ ma adabaghị maka ịtọgbọ na iji ya eme ihe. Biko jiri onye na - ehicha ụlọ gị maka ihicha na mmezi oge niile dịka usoro ndị nrụpụtara si dị. Zere ihe mgbaze ndị dị elu dị ka toluene, mmiri banana, na acids siri ike, ma wụsa ihe ngwọta alkaline siri ike n’elu ala. Zere iji ngwaọrụ na-ekwesịghị ekwesị na sharps iji kpochapụ ma ọ bụ mebie elu ala.